Imveliso yeCompactic Production Line - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Sinamava apheleleyo kumgca wokuvelisa isichumiso esimbaxa. Asijongi kuphela kwinkqubo nganye kwikhonkco kwinkqubo yemveliso, kodwa sihlala siqonda iinkcukacha zenkqubo nganye yemveliso kwaye siphumelele ngokugqibeleleyo kunxibelelwano. Sinikezela ngezisombululo zemigca elungiselelwe wena ngokweemfuno zabathengi.
Inkqubo epheleleyo yemveliso yenye yeenzuzo eziphambili zentsebenziswano yakho neYuzheng Heavy Industries. Sinikezela ngenkqubo yoyilo kunye nokuveliswa kweseti epheleleyo yemigca yokuvelisa igubu.
Isichumisi esintsonkothileyo sisichumisi esidityanisiweyo esine-nitrogen, i-phosphorus kunye ne-potassium, exutywe ngokwenxalenye ethile yesichumiso esinye kwaye idityaniswe ngokuphendula kwemichiza. Umxholo wesondlo uyafana kwaye ubungakanani bamasuntswana bunye. Umgca wemveliso yemveliso yesichumisi unokuziqhelanisa nobubanzi kwi-granulation yezinto ezahlukeneyo zecompact.
Isichumiso sekhompawundi sineempawu zegranulation efanayo, umbala oqaqambileyo, umgangatho ozinzileyo, kunye nokunyibilika ngokulula okufunxa izityalo. Ngokukodwa, kukhuselekile ukuba imbewu ikhule isichumisi. Zilungele zonke iintlobo zomhlaba nengqolowa, umbona, imelon kunye neziqhamo, amandongomane, imifuno, iimbotyi, iintyatyambo, imithi yeziqhamo kunye nezinye izityalo. Kufanelekile kwisichumiso esisisiseko, isichumiso, ukugxotha isichumisi, isichumiso kunye nokunkcenkceshela.
Izinto zokwenza imveliso yemveliso yezichumiso zibandakanya i-urea, i-ammonium chloride, i-ammonium sulfate, i-ammonia engamanzi, i-ammonium monophosphate, i-diammonium phosphate, i-potassium chloride, i-potassium sulphate, kubandakanya udongwe kunye nezinye izinto ezizalisayo. Izinto ezahlukeneyo zezinto eziphilayo zongezwa ngokweemfuno zomhlaba:
1. Ilindle lezilwanyana: inkuku, ubulongwe beehagu, ubulongwe beegusha, ukucula kweenkomo, umgquba wehashe, umgquba womvundla, njl.
Umgca wemveliso yemveliso yesichumiso uxhotyiswe ngesixhobo esiguqukayo, i-axis ene-axis blender, isichumisi esitsha sombumbulu, isityumzi esime nkqo, isigubhu sokomisa igubu, umatshini wokugalela igubu, umatshini wokutyabeka, umqokeleli wothuli, ukupakisha okuzenzekelayo umatshini kunye nezinye izixhobo ezincedisayo.
Njengomvelisi oqeqeshiweyo wemveliso yezixhobo zokuchumisa, sinikezela abathengi ngemigca yokuvelisa kunye neetoni ezingama-10,000 ngonyaka ukuya kwiitoni ezingama-200,000 ngonyaka.
1. Izinga le-granulation liphezulu njenge-70% ngomatshini wegrum granulation ohamba phambili.
2. Amacandelo aphambili amkela izinto ezinxibayo kunye nokuthintela umhlwa, kwaye izixhobo zinobomi obude benkonzo.
3. I-drum granulator ejikelezayo ifakwe i-silicone okanye iiplati zensimbi ezingenasici, kwaye izinto azikho lula ukunamathela eludongeni lwangaphakathi lomatshini.
Umsebenzi ozinzileyo, ukugcinwa okufanelekileyo, ukusebenza kakuhle kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi.
5.Sebenzisa ibhokisi yokuhambisa ukudibanisa umgca wemveliso uphumeze imveliso eqhubekayo.
6. Sebenzisa iiseti ezimbini zamagumbi okususa uthuli ukunyanga igesi yomsila ukukhusela indalo.
7. Ukwahlulwa kwabasebenzi beesefu ezimbini kuqinisekisa ukuba ubungakanani bamasuntswana buyalingana kwaye umgangatho ufanelekile.
8. Ukuxubana okungafaniyo, ukomisa, ukupholisa, ukutyabeka kunye nezinye iinkqubo zenza ukuba imveliso egqityiweyo iphezulu kumgangatho.
Inkqubo yokuhamba komgca wemveliso yezichumiso zekomityi: izinto ezingavuthiweyo → izinto ezixubileyo → ityhubhu → ukomisa → ukupholisa → ukugqitywa kwemveliso yokuhlolwa kwemveliso → ukwahlulwa kwamasuntswana eplastiki → ukutyabeka → ukugqitywa kwemveliso yokupakisha → ukugcinwa. Qaphela: le layini yemveliso yeyokujonga kuphela.
Izinto zokwenza imveliso:
Ngokwemfuno yentengiso kunye neziphumo zokumiselwa komhlaba, i-urea, i-ammonium nitrate, i-ammonium chloride, i-ammonium thiophosphate, i-ammonium phosphate, i-diammonium phosphate, i-calcium enzima, i-potassium chloride (i-potassium sulphate) kunye nezinye izinto ezisasazwayo zisasazwa kwinxalenye ethile. Izongezo, ukulandelela izinto, njl njl. Zisetyenziswa njengezithako kwinxalenye ethile ngezikali zebhanti. Ngokomyinge wefomyula, zonke izinto zokwenza izinto ezingafunekiyo zihamba ngokulinganayo ukusuka kumabhanti ukuya kubxube, inkqubo ebizwa ngokuba ziipremixes. Iqinisekisa ukuchaneka kokuqulunqwa kwaye ifezekise izithako eziqhubekayo ezifanelekileyo.
Izinto ezilungiselelwe izinto eziluhlaza zixutywe ngokupheleleyo kwaye zavuselelwa ngokulinganayo, zibeka isiseko sokusebenza ngokukuko kunye nomgangatho ophezulu wesichumiso segranular. Umxhubi oxwesileyo okanye idiski yesixubisi inokusetyenziselwa ukuxuba okufanayo kunye nokukhuthaza.
Imathiriyeli emva kokuxubana kunye nokutyunyuzwa ngokulinganayo ithuthwa isuka kwibhanti yokuhambisa iye kwisakhiwo esitsha sesichumisi sesichumisi. Ngokujikeleza okuqhubekayo kwegubu, izinto ezibonakalayo zenza intshukumo yokuqengqeleka ecaleni kwendlela ethile. Phantsi koxinzelelo lwe-extrusion oluvelisiweyo, loo nto iphinda idityaniswe ibe ngamasuntswana amancinci kwaye iqhotyoshelwe kumgubo ojikeleze ngokuthe ngcembe ukuba yenze imilo efanelekileyo yokujikeleza. Iigranules.
3. iigranuele ezomileyo:
Izinto ze-granulation kufuneka zomiswe ngaphambi kokuba zihlangabezane neemfuno zomxholo wokufuma. Xa isomisi sijikeleza, isitya sangaphakathi sokuphakamisa siqhubeka siphakamisa kwaye siphosa amasuntswana okubumba, ukuze loo nto inxibelelane ngokupheleleyo nomoya oshushu ukuze ususe ukufuma kuyo, ukuze ufezekise injongo yokoma okufanayo. Yamkela inkqubo yokuhlanjululwa komoya ezizimeleyo yokukhupha iigesi zangaphakathi kunye nokugcina amandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa.
Emva kokuba amasuntswana ezinto zomile, kufuneka zithunyelwe kupholile ukuze zipholise. Ukupholisa kuqhagamshelwe kukuhambisa ibhanti kwindawo yokomisa. Ukupholisa kungasusa uthuli, kuphucule ukusebenza kokupholisa kunye nokusetyenziswa kwamandla okushushu, kunye nokususa ukufuma okuvela kumasuntswana.
Emva kokuba izinto zomzimba zipholile, zonke izinto ezintle nezikhulu zivavanywa ngesihlunu esiroliweyo. Iimveliso ezingagunyaziswanga ezikhutshiwe zisuka kwibhanti yokuhambisa ukuya kwi-blender ziyashukunyiswa kwaye zenziwe granulated ngezinto ezingasetyenziswanga kwakhona. Imveliso egqityiweyo iya kusiwa kumatshini wokudibanisa isichumisi.
Isetyenziselwa ukufaka ifilimu efanayo yokukhusela kumphezulu wamasuntswana agqityiweyo ukuphucula ubomi beeshelfu kunye nokwenza amasuntswana agude. Emva kokutyabeka, likhonkco lokugqibela kuyo yonke inkqubo yemveliso-ukupakisha.
Le nkqubo yamkela umatshini wokupakisha wobungakanani ozenzekelayo. Lo matshini ubunjwe ngumatshini wokulinganisa ngokuzenzekelayo, inkqubo yokuhambisa, umatshini wokutywina, njl. Unako nokuqwalasela ii-hoppers ngokweemfuno zabathengi. Iyakuqonda ukupakishwa kobungakanani bezinto ezininzi ezinje ngesichumiso somgquba kunye nesichumisi esimbaxa.